I-SuperGIS, umbono wokuqala-iGeofumadas
I-SuperGIS, umbono wokuqala
NgoDisemba, 2012 Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala, SuperGIS
Kwimeko yethu yasentshona iSuperGIS ayiphumelelanga kwindawo ebekiweyo, nangona kunjalo eMpuma, xa kuthethwa ngamazwe afana ne-India, China, Taiwan, Singapoore -ukubala nje abambalwa- iSuperGIS inendawo ebangela umdla. Ndiceba ukuvavanya ezi zixhobo ngo-2013 njengoko ndenzile GvSIG y GIS asibonise; ukuthelekisa ukusebenza kwayo; ngoku ngoku ndiza kubonelela kuqala kwi-ecosystem ngokubanzi.
Imodeli yokwehla ibonisa ingcambu yale nkqubo, eyayizalwe ngokusisiseko yiSuperGEO, inkampani ethi, izama ukusasaza iimveliso ze-ESRI eTaiwan, yaqonda ukuba kulula ukwenza imveliso yayo kunokuthengisa imveliso yomntu wesithathu. Ngoku ikumazwekazi onke, ngesicwangciso-qhinga samazwe aphesheya apho i-mission ithi: ukuba phakathi kweempawu ezi-3 eziphezulu kunye nobukho behlabathi kunye nobunkokeli kubuchwephesha kumxholo we-geospatial.
Ukusuka apho, kubonakala ngathi yinkqubo yezicelo ezisetyenziswa kakhulu kwi-ESRI, ezinje ukuba namagama alingana ngokufanayo; kunye nezilungelelaniso ezize zinike ixabiso elongezelelweyo elongezelelweyo kwaye kunjalo kunye namaxabiso aphantsi kakhulu.
Imigqaliselo ephezulu ngoku eyokuqalisa i-3.1a inguqu lulandelayo:
Nantsi eyona mveliso iphambili yi-SuperGIS Desktop, equlathe iindlela ezisisiseko zesixhobo se-GIS esiqhelekileyo kwimiba efana nokubanjwa, ulwakhiwo, uhlalutyo lwedatha kunye nokuveliswa kweemephu zokushicilela. Kukho ezinye iZongezo ezisimahla kule nguqulo, uninzi lwazo lwenza ukuba uhlobo lwedesktop lusebenze njengomthengi kwidatha enikezelwa kolunye ulwandiso. Phakathi kwezi Zongezo zezi:
Umxhasi we-OGC ukunamathela kwimigangatho efana ne-WMS, i-WFS, i-WCS, njl.
I-GPS ukuxhuma ummkeli kunye nokulawula idatha eyayifumanayo.
I-Client yeGeodatabase enokuxhasa ukukhuphela izakhiwo ukusuka kwi-Access MDB, i-SQL Server, i-Oracle Spatial, i-PostgreSQL, njl.
Imephu yeTile yeTile, ongayenza idatha engayifundwa kunye nezicelo ze-GIS zeselula kunye ne-Super Web.
Umxhasi womSeva, ukuxhuma kwiidatha ezigqithwe ngeServGIS Server kwaye uzilayishe njengezobekwa kwidesktophu yekhompyutha kunye nokuhlelwa kohlalutyo kubo ngokungathi ziluhlu lwendawo.
Umxhasi we-Desktop Client Client, njengabadlulileyo, ukusebenzisana ukwenza isikhundla, ukucoca kunye nokuhlalutya kwedatha ekhishwe kwandiswa kwesevisi yesithombe.
Ukongezelela, ezi zandiso zilandelayo zivela:
Umhlalutyi weStatical Static
Umhlalutyi wezinto eziphilayo. Oku kuyamangalisa njengoko inezalathiso zokuxabisa ezingaphezu kwe-100 kulwabiwo lwendawo yezilwanyana kwimeko yendalo.
Yaye kunye nesicelo kuphela eTaiwan yi-CTS kunye ne-CCTS, onokwenza utshintsho kunye nezicwangciso ezisetyenziswe kweli lizwe (TWD67, TWD97) kwakunye nokudibanisa kwiziseko zedatha zaseTaiwan naseChina.
Ezi zizixhobo zokupapasha iimephu kunye nokulawula idatha kwiimeko ezabelwana ngazo. Ikwavumela uguqulelo lwedesktop ukuxhasa iinkonzo ezenziweyo kwiinguqulelo zewebhu ezivela kwi-SuperGIS Desktop, SuperPad, WMS, WFS, WCS kunye nemigangatho ye-KML njengomthengi weselfowuni.
Ukupapasha idatha unayo yezi zicelo ezilandelayo:
I-SuperWeb ye-GIS, iifayili ezithakazelisayo ukudala iinkonzo zewebhu kunye neemplates ezenziwe ngaphambili ezisekelwe kwi-Adobe Flex kunye neMicrosoft Silverlight.
SuperGIS U mfa nekiso
Le yilayibrari yamacandelo okuphuhlisa isicelo usebenzisa i-OpenGIS SFO eqhelekileyo kunye neVisual Basic, Visual Studio .NET, i-Visual C ++ ne-Delphi.
Ukongeza kwinguqu ye-generic ebizwa ngokuba yi-SuperGIS Engine kukho izandiso ezithi, njengeenguqulelo zeseva, ziyafana nezandiso zedesktop:
Izinto zeStadistical Objects
Kwizicelo eziphathekayo kukho ezinye zezixhobo zokusebenza zakudala, kunye nabanye abaneengqungquthela kwiinguqu yomsebenzisi wokugqibela:
Injini ye-SuperGIS ye-Mobile ukuphuhlisa izicelo zezixhobo zeselula.
SuperPad ukuphathwa kwe-GIS ngokuqhelekileyo
SuperField kunye neSu SuperSurv abanegunya lokufaka isicelo kwisimo sezolimo
I-SuperGIS Mobile Tour iyasebenza kakhulu ukudala imisebenzi ejoliswe kwiindawo zokuvakasha eziquka izinto ezifakwe kwi-multimedia.
Ifowuni ye-Cadastral GIS, eli lilodwa lokusebenza olukhethekileyo lolawulo lwe-cadastral kodwa lufumaneka kuphela eTaiwan
Ukuqukumbela, umgca onomdla weemveliso nangona zingazalisi uluhlu olungapheliyo lwe-ESRI, zimele enye indlela yoqoqosho yomsebenzisi enezixhobo ezingaphezulu kwama-25. Ngoku ndongeza kwifayile ye- uluhlu lwesofthiwe esiye sayihlola.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-2012 engcono kwii-Geofumadas
Post Next I-Geofumed: ii-akhawunti ze-25 eziphambili ezilandelayoOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "SuperGIS, umbono wokuqala"
Felix Gonzalez uthi:
Ndineli thuba lokuqhagamshelana nabantu abaphethe iS SUPERGIS kwimarike yaseYurophu.
Ngokuqinisekileyo, i-SUPERGIS iya kuba ngumqhubi okhuselekileyo we-ESRI (ndiyathemba ukuba le yimeko kwaye sinqume amanani aphantsi); kodwa unengxaki yokuthengisa kunye neenkonzo endikuxelele ngazo. Nangona baye bathetha neenkampani ukuthengisa ukusuka apho (njengokuba kunjalo kwam,) benqaba ukunika inkxaso kwezobuchwepheshe kumazwe abo. Ukusuka kwimbono yam kukuphutha kuba ufuna unxibelelwano oluchanekileyo nenkxaso enjalo yobugcisa.